देउवालाई विश्वासको मत नदिने भन्दै माधव नेपाल पक्षका १५ सांसद संसद भवनबाट बाहिरिए - fairnepal.net
देउवालाई विश्वासको मत नदिने भन्दै माधव नेपाल पक्षका १५ सांसद संसद भवनबाट बाहिरिए
FN July 18, 2021	No Comments
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सबै नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केही पनि होइन भनेर नहेप्न चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले आगोसँग खेल्ने काम त्यति राम्रो नहुने भन्दै माओवादीलाई हेप्न र अपमानित गर्न थालेमा आगो फेरि सल्किन सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँले भारतीय जासुसी संस्था रअ प्रमुख सामंत गोयल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा मध्यराति भएको भेटपछि अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले एमालेका नेताहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले निर्दलीयता निम्त्याउने भनेर दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै गोहीको आँशु नबगाउन सुझाव दिनुभयो ।
अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रचण्डले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा सहभागी नहुनु आश्चर्यजनक रहेको पनि बताउनुभयो ।
ओली पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा अनुपस्थित भएकोबारेमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । भिन्न मतलाई स्वीकार्न सक्ने आँट ओलीसँग नभएको पनि प्रचण्डले टिप्पणी गर्नुभयो ।
अब एमाले फुट्ला कि एकीकृत अवस्थामै रहला त ?
देउवालाई सर्वोच्चमा साथ दिने तर विश्वासको मत नदिने को–को…
भीम रावलको कमल थापाले गरे उच्च प्रशंसा
कसरी बन्छ नयाँ सरकार ? फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने…
Previous Previous post: भीम रावलको कमल थापाले गरे उच्च प्रशंसा
Next Next post: प्रत्यक्ष निर्वाचित यी १२ सांसदले छाडे नेपालको साथ